Izinhlelo zokusebenza ezinhle zekhamera zabathandi bezithombe | Izindaba zamagajethi
Izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zekhamera ze-Android
Ngesonto eledlule besiphawula ngawe izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuthatha izithombe ze-Android, futhi kungaba kanjani enye, manje sikulethela izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zekhamera Okokugcina kwakho kwe-Android.
Izikhathi eziningi uhlelo lokusebenza ngokwalo oluza ngokujwayelekile nge-Android ayilethi okwanele lokho umuntu angakudinga ngezimo ezithile noma ukudala uhlobo olukhethekile lwezithombe ezifana ne-HDR noma lezo ezidala lokho kuthambeka okuthandwa kakhulu muva nje.
Uchungechunge lwezinhlelo zokusebenza zekhamera ezizothuthuka izici zezithombe zamadivayisi akho I-Android nokuthi ngaphambi kokufika kwalezi zinsuku zentwasahlobo sibhekene nesikhathi esihle kakhulu sokuthola okusemandleni ethu ukuthatha lezo zithombe ezizokhombisa izikhathi ezinhle kakhulu zempilo yethu, kungaba nomlingani wethu, abangane noma umndeni.
1 Ukusondeza kwekhamera fx
2 Ikhamera ye-360
4 Ikhamera ye-HDR +
7 Ikhamera FV-5
Ukusondeza kwekhamera fx
Ngiqala nge-Camera Zoom FX njengoba injalo isicelo sekhamera esihle kakhulu ongasithola njengenye indlela ku-Android. Yize singabhekene nesicelo samahhala ngoba intengo yayo ingu- € 1,99 ku-Google Play Isitolo, kungenye yezinto ezibalulekile uma ungabathandi bezithombe.
I-Camera Zoom FX inezinhlobo zonke zezihlungi, i-zoom, i-timer kanye nokulingana Isiqinisi sesithombe phakathi kokuvelele, kanye nemisebenzi eyisisekelo noma iluphi uhlelo lokusebenza yalolu hlobo okufanele ibe nayo njengemodi yokuqhuma, ukucubungula ngemuva ngemiphumela ehlukile efana ne- "Tilt-Shift" noma imiphumela yokuhlanekezela.
Ngokuvamile isici sayo esihle ukuthi kuphelele kangakanani. Sizodinga le ndatshana yonke ukuqamba konke ukusebenza kwayo. Ngithe, uma ungumthandi wezithombe, i-Camera Zoom FX ingukutholwa okudingekayo.
Futhi Ikhamera 360 iyona lokusebenza yekhamera yamahhala ye-android, ngoba ngeke uthole okunye okulingana nentengo yenani okunikezwayo kakhulu. Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-250, iCamera 360 nayo ivelela ngokuba nezici ezahlukahlukene.
Kusuka kuzihlungi ezahlukahlukene, izigcawu noma kungenzeka ukugcina izithombe ku-albhamu yethu efwini yizici ezizogqama kakhulu shazi. Futhi phakathi kwezinto ezintsha zayo zakamuva kukhona «ukudubula okulula», a imodi yokudubula ethola indawo yesehlakalo yesithombe bese ufaka isihlungi esifanele sona.
Isicelo sokuthi imvamisa bayathuthuka ngokusebenza okusha okususelwa kuzinguqulo ezintsha futhi iphakathi kwezinhlelo zokusebenza zekhamera ezinhle kakhulu ze-Android.
Yize iku-beta ku-Google Play Isitolo, ingesinye sezinhlelo zokusebenza ezintsha ongasithola ku-Android. Ingabe isicelo se-serial seCyanogenMod ROM, kepha ngemuva kwezinkinga ezahlukahlukene wehlukana neqembu lentuthuko.
Uhlelo lokusebenza olunezici ezinhle, zazo Kuyafaneleka ukugqamisa isikhombimsebenzisi sayo somsebenzisi lokho kuzokuvumela ukuthi uzulazule kuyo ngendlela elula futhi esheshayo. Sizoba nephaneli lokuzula ohlangothini lwamathuluzi ahlukile njenge-flash mode, ibhalansi emhlophe, imodi yesigcawu, i-HDR, imiphumela yombala nemodi yokuqhuma. Ngezansi, inkinobho yokushutha, okuthi uma uyibamba, kuvele isondo lezinketho elizoshintshana, phakathi kwezinye izinto, ikhamera yangaphambili noma isithombe esiyindilinga, i-panoramic noma ividiyo. Futhi uma ufuna ukubona i-albhamu yezithombe kusuka phezulu ungayilayida ukuze ubone izithombe ezithathiwe.
Uhlelo lokusebenza lwekhamera oluhle kakhulu nge interface enembile futhi yesimanje ezokwazi ukufaka ngokuphelele endaweni ye-serial yocingo lwakho.
Ikhamera ye-HDR +
Ukube ubufuna isicelo sokuthatha izithombe ze-HDR, Ikhamera ye-HDR + ilungele lo msebenzi. Ngezindlela zokudubula eziyi-11, ukulawula okuphelele kwekhamera ne-HDR yangempela, lolu hlelo lokusebenza lungcono kakhulu ongaluthola ku-terminal yakho ye-Android.
In izithombe zasemini nomaphi lapho ufuna khipha bonke ubukhazikhazi bendawo noma ithuthukise ngokugqamile imibala yanoma isiphi isimo ezimeni ezinhle zokukhanyisa, i-HDR Camera izokwenza ukuthi uthathe izithombe ngekhwalithi evelele.
Phakathi kwezinye izici inakho ukuphatha kahle izinto ezihambayo ukuze zingaveli "njengezipoki" esithombeni, futhi ungalawula zonke izinhlobo zamapharamitha njengokuqhathanisa, ukuqina kombala noma ukuvezwa. Unesicelo esikhokhelwe se- € 2,18 futhi nesamahhala sokuzama.
I-Vignette igxile kuzihlungi ze-Android, futhi lona kungumsebenzi wawo oyinhloko ukuba nezingama-70 zazo kanye nozimele abangama-50 bokwenza ngezifiso ukuthatha izithombe ezihlukile.
Phakathi kwezitayela ozothola kuzihlungi zazo kukhona i-retro, i-vintage, i-lomo, i-Diana, i-Holga, i-Polaroid, amalahle, i-tilf-shift nezinye eziningi. Ngaphandle kwalokho inemisebenzi eyisisekelo njengezinye izinhlelo zokusebenza ezifana ne-timer, ukusondeza kwedijithali, usebenzisa inkinobho yamandla ukuthatha izithombe noma isiqinisi sesithombe.
I-Vignette ngemodi yayo yesihlungi engahleliwe inikeza indlela ejabulisa kakhulu futhi emnandi yokuthatha izithombe ezikhethekile nabangani bakho noma umndeni wakho. Uhlobo olukhokhelwe lubiza u- € 1,20 futhi unedemo ongazama ngaphambi kokukhetha ukuyithenga ephelele.
IVSCO Cam ivela ku-iOS ngokugunyazwa okusho ukuthi le ndlela futhi sibhekene nenye yezinto ezintsha ze-Android ezinsukwini zakamuva. Uhlelo lokusebenza nakho konke okukodwa, ngoba lunokusebenza okuphelele kakhulu kwekhamera bese kuba nomhleli wesithombe olandela umugqa wekhwalithi ofanayo nowangaphambilini. Yini eyengeza kukho ekubeni enye yezindlela ezingcono kakhulu ze-Android, nangaphezulu kwamahhala.
Enye yezimfanelo ze-VSCO Cam yi-interface yomsebenzisi enikeza uhlelo lokusebenza ukuphatha okunembile nokusheshayo kuyo yonke inqwaba yezinketho. Mayelana namathuluzi wokuhlela izithombe, uzothola ukuvezwa, izinga lokushisa, umehluko, ukujikeleza, ukunqampuna noma i-vignette.
Futhi uma ufuna ukufaka izihlungi ezikhethekile ongazisebenzisa ezithombeni zakho, ungakhetha ukukhokha ama-euro ambalwa ukuze uzithenge ku-Google Play Isitolo. Ngokuvamile, sibhekene enye yezinhlelo zokusebenza zezithombe zemfashini.
Uma ufuna uhlelo lokusebenza lwekhamera lobuchwepheshe lwe-Android, lena yi-Camera FV-5. Ubuningi bezinketho zayo kuzokwenza kubonakale sengathi ubhekene nochwepheshe ngokuphelele.
Isinxephezelo sokuvezwa, i-ISO, imitha yokulinganisa elula, imodi yokugxila noma ibhalansi emhlophe phakathi kwemisebenzi eyisisekelo iningi lochwepheshe bohlobo lwe-DSLR abanayo, efana: ukubonisa isikhathi sesikhathi sokuvula, ukuvula kanye nemitha yokuchayeka nge-EV nokubhaka kubakaki. Qedela ukulawula ukubakaki kokuvezwa kusuka kuzithombe ezi-3 kuye kwezi-7 ezingenamkhawulo wokuvezwa nokuphambuka kwe-EV.
Sizoba nezinketho eziningi zokwenza ngisho izithombe ku-PNG ngokuthwebula okungalahleki noma imodi yohlelo oluzenzakalelayo, izingidi zokuchayeka nebhalansi emhlophe. Unenketho yokwabela yonke imisebenzi yekhamera kokhiye bomzimba befoni.
Isiyonke isicelo esinakho konke. Intengo yayo ingu- € 2,99 futhi inenguqulo yamahhala ekhawulela usayizi wezithombe.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zekhamera ze-Android
Ungalanda kanjani futhi ufake i-Office 2013 ebhaliswe ngokusemthethweni
Ungayakha kanjani i-akhawunti yaseJapan ku-PlayStation Network